Zụta Oru oma PCT Mmeju | SARlọ ahịa SARMs
PCT & Cycle Nkwado
PCT Post Cycle Agwọ Stack
Nchịkọta ndị a bụ ihe anyị gosipụtara na SARMs Store UK dị ka usoro nkwado kachasị mma maka SARM. Mụtakwuo ihe kpatara nkwado okirikiri ji dị mkpa na ngwaahịa kachasị mma maka ọgwụgwọ post-okirikiri.
Gịnị bụ nkwado okirikiri?
A na-akpọkwa nkwado nkwado dị ka nkwado imeju, bụ ngwaahịa a na-ewere n'oge usoro SARM ma ọ bụ usoro prohormone. A na-eche ngwaahịa ndị a iji chebe ahụ na akụkụ ahụ pụọ na mmetụta ndị na-emerụ ahụ ma bulie uru ndị emere n'oge oge SARM.
Gịnị kpatara ọgwụgwọ post-okirikiri ji dị mkpa?
Usoro ọgwụgwọ na-agagharị (PCT) na-enyere ahụ aka ịlaghachi mgbe usoro arụmọrụ na-aga n'ihu. Ngwaahịa ndị a na - egbochi homonụ ebe ndị ọrụ na - ewere ha, nke nwere ike ibute nsogbu na usoro mmepụta nke testosterone.
Mgbe SARM ma ọ bụ ndụmọdụ ndụmọdụ, ọ dị oké mkpa maka ndị ọrụ iji mejupụta ogo testosterone nke ahụ ha. Na-enweghị ya, mgbake ga-adị nwayọ nwayọ ma ndị ọrụ nwere ike ịnwe oke ike ọgwụgwụ na ụfọdụ ịda mbà. Inweta PCT dị mkpa iji nọgide na-enwe ọdịmma zuru oke mgbe ahụ gachara usoro mmelite. Na-enweghị ya, ahụ ga-ewe ogologo oge iji gbakee.
Anyị na-akwado ngwaahịa ndị a maka ọgwụgwọ post-okirikiri (PCT) na nkwado okirikiri.
Bodybuilt Labs SARM na-akwado nkwado
Ngwaahịa a pụtara iwere ya na usoro SARM. Ọ na-echebe akụkụ ahụ na ahụ ya ka ndị ọrụ wee nweta ọtụtụ uru site na okirikiri SARM ha. Ngwaahịa a ga-abawanye nkwado na nsonaazụ ya ka ahụ wee nweta ihe niile ọ chọrọ mgbe ọ nọ na SARM na ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ. Usoro nkwado a nwere
Mkpụrụ Mkpụrụ Mkpụrụ Na-ewepụ
Tribulus Terrestris wepụ
Hụrụ Palmetto wepụ
Wepu Mkpụrụ Celery
Ndị ọrụ kwesịrị iburu capsules atọ otu ugboro kwa ụbọchị yana SARM ndị ọzọ ha na-ewere.
A na-eme PCT a na-eme PCT nke a site na ihe ndị dị na mbara igwe iji nyere aka chebe ahụ gị pụọ na mmetụta nke estrogenic ma nyere gị aka ijide uru site na usoro SARM. Nke a bụ ihe ndị dị mkpa dị na PCT a:
Ashwagandha wepụ - ahịhịa adaptogenic eji mee ọtụtụ narị afọ iji bulie usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ma melite ike zuru oke
Tribulus Terrestris wepụ - osisi ọgwụ a maara maka ikike belata cholesterol na ọbara shuga
Rhodiola Rosea wepụ - Na-eme ka ahụ na-eguzogide nrụgide
Ekwesịrị iji PCT a ugboro atọ kwa ụbọchị na usoro ọgwụ capsules atọ mgbe nri ọ bụla gasịrị.
Bodybuilt Labs Testo agbam ume
Ezubere ngwaahịa a ka ọ nyere aka bulie ogo testosterone na ahụ ma bulie ahụike na ntụkwasị obi zuru oke. Ọ na - enyere aka ịbawanye ike na ntachi obi. Ndị a bụ isi ihe:
Tongkat Ali - ogwu ogwu a maara iji mesoo obere libido na testosterone
Neting Net - Na-enyere aka na-agwọ ọrịa ogbu na nkwonkwo ma bulie ogo antioxidant ọbara
A na-atụ aro ka ndị ọrụ were capsules atọ otu ugboro kwa ụbọchị yana nri.
Animal Pak bụ onye ama ama na SARM yana ndị ọrụ nkwalite arụmọrụ. O nwere ihe karịrị ihe 60 dị mkpa na-egbochi ịmalite ihe ndị na-edozi ahụ. Ọ na - enyere aka ịzụ akwara site n’inweta ihe ndị dị ka amino acid, carbs, na vitamin na mineral ndị ọzọ.
Animal Pak anọwo na oge nke oge n'ihi na ọ na-arụ ọrụ yana n'ihi na ọ na-enyere ndị ọrụ ike site na mma plateaus.